ကမ်ဘာ အနှံ့ ပျေါလာတဲ့ သတ်တုတိုငျကွီး တှနေဲ့ ရနျကုနျ မွို့လယျခေါငျက မွှကွေီး တှေ ရဲ့ ထူးဆနျးတဲ့ ဆကျနှယျမှုမြား – GaMone Media
Homepage / Local News / ကမ်ဘာ အနှံ့ ပျေါလာတဲ့ သတ်တုတိုငျကွီး တှနေဲ့ ရနျကုနျ မွို့လယျခေါငျက မွှကွေီး တှေ ရဲ့ ထူးဆနျးတဲ့ ဆကျနှယျမှုမြား
ကမ်ဘာ အနှံ့ ပျေါလာတဲ့ သတ်တုတိုငျကွီး တှနေဲ့ ရနျကုနျ မွို့လယျခေါငျက မွှကွေီး တှေ ရဲ့ ထူးဆနျးတဲ့ ဆကျနှယျမှုမြား
နဲနဲ မကျြစိနောကျလာလို့ ဒီစတီးသတ်တုခြောငျးကွီးဟာ ဟိုနရောပျေါလိုကျ ဒီနရော ပြောကျလိုကျ ဖွဈနခွေငျးဟာ ယူအကျဖျအို နဲ့ ဂွိုဟျသား ရူးဒေ အပြျောလုပျတာ မဟုတျရငျ တရုတျရဲ့ နိုငျငံရေး အာရုံ လှညျ့ကှကျပါပဲ / ယူဆတယျ နောကျ ခုတလော ရနျကုနျမှာ စပါးအုံး စပါးကွီးမှေ အကောငျကွီးတှေ တှတေ့ာဟာ ယတွာအရ လုပျဆောငျ တာ မဟုတျပဲ မွအေောကျတှငျး မွောငျးတှထေဲကနေ ထှကျလာ တှတေ့ာဆိုတော့ အဲလိုမွှကွေီးတှေ ဟာ ရနျကုနျမွို့ရဲ့ မွအေောကျ မွို့ပတျလှိုဏျဂူထဲမှာ ပေါကျဖှားရှငျ‌သနျနကွေတယျလို့ လလေ့ာမှတျသားဖူးတယျ ဒါကွောငျ့ လူတှဟော ထိုမွအေောကျ လှိုငျဂူတှထေဲ မဆငျးမသှားမလာရဲကွပဲ အဂျလိပျ လကျထကျ အလှနျကစလို့ ခုထိ နဈမွုတျ ပိတျဆို့ နတေဲ့နရောလို့ သိရတယျ။ ခု အဲ့အောကျမှာ ဘာတှေ လုပျနေ ဖွဈနသေလဲ ဘယျသူတှေ ဝငျရောကျ ခိုအောငျးနသေလဲ ??
အဲ့နရောက ရနျကုနျရဲ့မွို့ပွအတှကျနဲ့ ပငျလယျဝအတှကျ မွပေျေါမွအေောကျ လုံခွုံရေးနဲ့ ကာကှယျရေး နရောလိုမြိုး ဖွဈသလို အရေးပါတဲ့ နရောလညျး ဖွဈတယျ အရငျခတျေတှကေ အဲ့အောကျမှာ မှောငျခိုရာဇာတှေ လူမိုကျတှေ ခိုအောငျးလှုပျရှားရာ နရောလညျး ဖွဈတယျ ခု ဆေးပွားတှေ ဆကျတိုကျဖမျးမိနကွေတော့ ထိုနရောကို အသုံးပွုပွီး လှုပျရှားလုပျဆောငျနကွေသလား ဒါကွောငျ့ ထိုမွအေောကျမှ မွှကွေီးတှဟော လူတှကွေောငျ့ ရနျကုနျမွို့ပွမွပေျေါ ကို ထှကျပွေး တိမျးရှောငျ တကျလာ ထှကျလာကွသလားဆိုတာ ဘာကွောငျ့ဆိုတော့ သာကောတို့က လုပျရငျ ပလနျနဲ့ စီမံကိနျးနဲ့ ဗြုဟာနဲ့ အကှကျကြ အခြိနျယူပွီး လုပျလရှေိ့တယျဆိုတာ ဂူတှဖေောကျပွီး ဆေးပွားနဲ့ နိုငျငံရေး လုပျကွံမှုတှကေိုကွညျ့ရငျ သခြောအခြိနျယူပွီး အသေးစိတျနဲ့ စနဈတကြ လုပျကွတယျ မဟုတျလား။ ခု အမရေိကနျကိုတောငျ ဆယျစုနှဈလောကျ အခြိနျယူ ဆဲလျတှမွေုတျပွီး လုပျဆောငျ ထားတာ ထရနျ့ဖျောကောငျလုပျရှငျးနလေို့ မဟုတျရငျ ယူအကျဈ ပွိုကှဲတာ ကွာလှပွီ။
ဒါကွောငျ့ သာကောရဲ့ စီမံကိနျးပရိုဂမျတှကေို လလေ့ာကွညျ့တော့ အရငျရေးပွခဲ့ဘူးတဲ့အတိုငျး ဗိုငျးရပျဈဇီဝစဈပှဲအစီအစဉျအတှကျ သခြော ပရိုဂမျဆှဲ တှကျခကျြပွီးမှ ကမ်ဘာကို တိုကျတာ ဖွဈကွောငျးနဲ့ ထို့နရေ့ကျဟာ ကမ်ဘာရဲ့ နှဈ ၁၀၀ ပွညျ့နှဈရောကျတိုငျး ကမ်ဘာကပျဖွဈသလို ကပျဆေးသလိုနဲ့ အယူဝါဒ ဒှိဟကှဲပွားနတေဲ့ အခြိနျအခါကို ရှေးခယျြပွီးမှ သဘာဝလို ပုံဖမျး သဘာဝမဟုတျသော လုပျဆောငျမှုတှကေို တုပပွီး ကမ်ဘာ့လူသားတှကေို အာရုံပွောငျး သဘာဝကပျဘေးရောဂါ ပုံဖျောဖို့အတှကျ တိုကျဆိုငျမှုနစှေဲ့ကို အသုံးခြ ထုတျလုပျ ဖွနိ့ တိုကျခိုကျခဲ့ကွောငျးနဲ့ ထိုကာလမတိုငျခငျ မွနျမာပွညျမှာလညျး ဆေးပညာဝနျထမျးတှေ ကွားထဲကို မိုးကတြှေ ထညျ့သှငျးထားလို့ ဆေးပညာရှငျမြား ဆန်ဒပွကနျ့ကှကျ ထုတျဖျောမှု ကနျပိနျးတှေ ရှိခဲ့ ပွုလုပျခဲ့ကွောငျး
နောကျ ထိုကိုဗဈဗိုငျးရကျဈပျေါလာပွီး ကမ်ဘာကို တိုကျခိုကျမှုလုပျ မွနျမာကို ထိစခွေငျးဖွငျ့ ယခုတိုငျ လကျသညျအပြောကျနဲ့ ပုနျးကှယျလြိုး တိုကျခိုကျခံနရေသညျကို လလေ့ာကွညျ့ရငျ အခြို့ဖွဈစဉျတှကေ လူတှေ တှေးထငျနသေလို မရိုးစငျးပဲ အစီစဉျတကြ သို့ အခှငျ့ရေးကို အသုံးခပြွီး နိုငျငံရေးကို အခြိနျကိုကျကစားကာ အကြိုးမွတျကို သဲ့ထုတျယူနကွေတယျဆိုတာ
နိုငျငံရေးနဲ့ပတျသကျရငျ အသေးစိတျကအစ အခြို့အရာတှေ နဲ့ အရာရာကို ပေါ့ဆ အလေးမထား မတှေးဆကွပဲ မနကွေပါရနျ သာကောနဲ့ ပွညျပနိုငျငံတှဟော စီမံကိနျး ပရိုဂမျနဲ့ AI နညျးပညာတှေ အသုံးပွု တှကျခကျြ လုပျဆောငျနကွေတယျဆိုတာ ကနြျောတို့လို ဘာနညျးပညာမှ မရှိ အတှေးချေါ အသိဉာဏျခတျေနောကျကပြွီး ရိုးသားပွညျသူမြားတဲ့ မြိုးဆကျတခတျေကို_ရှိသူ မွနျမာနိုငျငံကို နညျးပညာအမြိုးမြိုးနဲ့ နိုငျငံရေး စီးပှားရေးမှာ အလှယျတကူ သိမျးပိုကျလို့/ ပွီး အကြိုးမွတျ ထုတျယူလို့ ရတယျဆိုတာ စိတျထဲအမွဲ မှတျယူသိထားကွပါ…… ဗြာတို့ခဗြ
နဲနဲ မျက်စိနောက်လာလို့ ဒီစတီးသတ္တုချောင်းကြီးဟာ ဟိုနေရာပေါ်လိုက် ဒီနေရာ ပျောက်လိုက် ဖြစ်နေခြင်းဟာ ယူအက်ဖ်အို နဲ့ ဂြိုဟ်သား ရူးဒေ အပျော်လုပ်တာ မဟုတ်ရင် တရုတ်ရဲ့ နိုင်ငံရေး အာရုံ လှည့်ကွက်ပါပဲ / ယူဆတယ် နောက် ခုတလော ရန်ကုန်မှာ စပါးအုံး စပါးကြီးမွေ အကောင်ကြီးတွေ တွေ့တာဟာ ယတြာအရ လုပ်ဆောင် တာ မဟုတ်ပဲ မြေအောက်တွင်း မြောင်းတွေထဲကနေ ထွက်လာ တွေ့တာဆိုတော့ အဲလိုမြွေကြီးတွေ ဟာ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ မြေအောက် မြို့ပတ်လှိုဏ်ဂူထဲမှာ ပေါက်ဖွားရှင်‌သန်နေကြတယ်လို့ လေ့လာမှတ်သားဖူးတယ် ဒါကြောင့် လူတွေဟာ ထိုမြေအောက် လှိုင်ဂူတွေထဲ မဆင်းမသွားမလာရဲကြပဲ အဂ်လိပ် လက်ထက် အလွန်ကစလို့ ခုထိ နစ်မြုတ် ပိတ်ဆို့ နေတဲ့နေရာလို့ သိရတယ်။ ခု အဲ့အောက်မှာ ဘာတွေ လုပ်နေ ဖြစ်နေသလဲ ဘယ်သူတွေ ဝင်ရောက် ခိုအောင်းနေသလဲ ??
အဲ့နေရာက ရန်ကုန်ရဲ့မြို့ပြအတွက်နဲ့ ပင်လယ်ဝအတွက် မြေပေါ်မြေအောက် လုံခြုံရေးနဲ့ ကာကွယ်ရေး နေရာလိုမျိုး ဖြစ်သလို အရေးပါတဲ့ နေရာလည်း ဖြစ်တယ် အရင်ခေတ်တွေက အဲ့အောက်မှာ မှောင်ခိုရာဇာတွေ လူမိုက်တွေ ခိုအောင်းလှုပ်ရှားရာ နေရာလည်း ဖြစ်တယ် ခု ဆေးပြားတွေ ဆက်တိုက်ဖမ်းမိနေကြတော့ ထိုနေရာကို အသုံးပြုပြီး လှုပ်ရှားလုပ်ဆောင်နေကြသလား ဒါကြောင့် ထိုမြေအောက်မှ မြွေကြီးတွေဟာ လူတွေကြောင့် ရန်ကုန်မြို့ပြမြေပေါ် ကို ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင် တက်လာ ထွက်လာကြသလားဆိုတာ ဘာကြောင့်ဆိုတော့ သာကောတို့က လုပ်ရင် ပလန်နဲ့ စီမံကိန်းနဲ့ ဗျုဟာနဲ့ အကွက်ကျ အချိန်ယူပြီး လုပ်လေ့ရှိတယ်ဆိုတာ ဂူတွေဖောက်ပြီး ဆေးပြားနဲ့ နိုင်ငံရေး လုပ်ကြံမှုတွေကိုကြည့်ရင် သေချာအချိန်ယူပြီး အသေးစိတ်နဲ့ စနစ်တကျ လုပ်ကြတယ် မဟုတ်လား။ ခု အမေရိကန်ကိုတောင် ဆယ်စုနှစ်လောက် အချိန်ယူ ဆဲလ်တွေမြုတ်ပြီး လုပ်ဆောင် ထားတာ ထရန့်ဖော်ကောင်လုပ်ရှင်းနေလို့ မဟုတ်ရင် ယူအက်စ် ပြိုကွဲတာ ကြာလှပြီ။
ဒါကြောင့် သာကောရဲ့ စီမံကိန်းပရိုဂမ်တွေကို လေ့လာကြည့်တော့ အရင်ရေးပြခဲ့ဘူးတဲ့အတိုင်း ဗိုင်းရပ်စ်ဇီဝစစ်ပွဲအစီအစဉ်အတွက် သေချာ ပရိုဂမ်ဆွဲ တွက်ချက်ပြီးမှ ကမ္ဘာကို တိုက်တာ ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ထို့နေ့ရက်ဟာ ကမ္ဘာရဲ့ နှစ် ၁၀၀ ပြည့်နှစ်ရောက်တိုင်း ကမ္ဘာကပ်ဖြစ်သလို ကပ်ဆေးသလိုနဲ့ အယူဝါဒ ဒွိဟကွဲပြားနေတဲ့ အချိန်အခါကို ရွေးချယ်ပြီးမှ သဘာဝလို ပုံဖမ်း သဘာဝမဟုတ်သော လုပ်ဆောင်မှုတွေကို တုပပြီး ကမ္ဘာ့လူသားတွေကို အာရုံပြောင်း သဘာဝကပ်ဘေးရောဂါ ပုံဖော်ဖို့အတွက် တိုက်ဆိုင်မှုနေ့စွဲကို အသုံးချ ထုတ်လုပ် ဖြနိ့ တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းနဲ့ ထိုကာလမတိုင်ခင် မြန်မာပြည်မှာလည်း ဆေးပညာဝန်ထမ်းတွေ ကြားထဲကို မိုးကျတွေ ထည့်သွင်းထားလို့ ဆေးပညာရှင်များ ဆန္ဒပြကန့်ကွက် ထုတ်ဖော်မှု ကန်ပိန်းတွေ ရှိခဲ့ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း
နောက် ထိုကိုဗစ်ဗိုင်းရက်စ်ပေါ်လာပြီး ကမ္ဘာကို တိုက်ခိုက်မှုလုပ် မြန်မာကို ထိစေခြင်းဖြင့် ယခုတိုင် လက်သည်အပျောက်နဲ့ ပုန်းကွယ်လျိုး တိုက်ခိုက်ခံနေရသည်ကို လေ့လာကြည့်ရင် အချို့ဖြစ်စဉ်တွေက လူတွေ တွေးထင်နေသလို မရိုးစင်းပဲ အစီစဉ်တကျ သို့ အခွင့်ရေးကို အသုံးချပြီး နိုင်ငံရေးကို အချိန်ကိုက်ကစားကာ အကျိုးမြတ်ကို သဲ့ထုတ်ယူနေကြတယ်ဆိုတာ
နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ရင် အသေးစိတ်ကအစ အချို့အရာတွေ နဲ့ အရာရာကို ပေါ့ဆ အလေးမထား မတွေးဆကြပဲ မနေကြပါရန် သာကောနဲ့ ပြည်ပနိုင်ငံတွေဟာ စီမံကိန်း ပရိုဂမ်နဲ့ AI နည်းပညာတွေ အသုံးပြု တွက်ချက် လုပ်ဆောင်နေကြတယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့လို ဘာနည်းပညာမှ မရှိ အတွေးခေါ် အသိဉာဏ်ခေတ်နောက်ကျပြီး ရိုးသားပြည်သူများတဲ့ မျိုးဆက်တခေတ်ကို_ရှိသူ မြန်မာနိုင်ငံကို နည်းပညာအမျိုးမျိုးနဲ့ နိုင်ငံရေး စီးပွားရေးမှာ အလွယ်တကူ သိမ်းပိုက်လို့/ ပြီး အကျိုးမြတ် ထုတ်ယူလို့ ရတယ်ဆိုတာ စိတ်ထဲအမြဲ မှတ်ယူသိထားကြပါ…… ဗျာတို့ခဗျ
Previous post ဆကျဆီကကြ ပုံတှကွေောငျ့ လူကွိုကျမြားနေ တဲ့ အယျလာရဲ့ အလနျးစား ပုံရိပျမြား
Next post နာမညျကွီး နတေဲ့ အိုငျဒေါ မငျးသားကွီး နဲ့ မျောဒယျမလေး တို့ ရဲ့ ဇာတျလမျး